တနပ်စား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » တနပ်စား
Posted by johnnydeer on Apr 19, 2013 in Short Story | 18 comments
လူတစ်ယောက် ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲမှာစားပြီး ကုန်ခါနီး ခေါက်ဆွဲပန်းကန်ထဲ ဆံပင်ချည်တွေ ထည့်လိုက်ပြီး လူအများကြီးရှေ့မှာ ဆိုင်ရှင်ကို ရန်တွေ့ …ဆိုင်ရှင်က တောင်းပန်…ပြီးတော့
ပိုက်ဆံမရှင်းပဲ ထ ထွက်သွား….သူ ဘယ်လောက် လူရည်လည်သလဲ ဆိုတာဂုဏ်ယူတတ်တဲ့လူမျိုးတွေ့ဖူးကြမှာပေါ့…
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ …ဒါ လူရည် လည်တယ်လို့ ဘယ်လိုမှ မြင်ကြည့်လို့ မရဘူး…ယုတ်တယ် လို့ပဲ မြင်တယ်…ယုတ်တာတောင် ရိုးရိုး ယုတ်တာ
မဟုတ်ဘူး…ယုတ်ကန်းတယ်လို့ကို မြင်တာ…တခါထဲ အချီကြီး ပွသွားလို့ ယုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် လက်ခံလို့ရသေးတယ်…
ဘာမဟုတ်တဲ့ …ဘာမှ မဖြစ်လောက်တဲ့ ငွေအသပြာ နည်းနည်းလေးကိုယ့်အကျိုးအမြတ်ရဖို့ အတွက် သူတပါးအပေါ် မတရားသဖြင့် လူပုံအလယ် အရှက်ခွဲစော်ကား…နင်ပဲ
ငဆ ပြော…စိတ်ဓာတ် တော်တော် အောက်တန်းကျတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ်…ဆိုင်ရှင်ဘက်က အမြင်လေးကော တွေးကြည့်လိုက်ပါဦး….အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်…သူ့အမှားမဟုတ်ပဲ
လုပ်ကြံစော်ကားသွားလို့ လူပုံ အလယ်မှာ တောင်းပန်လိုက်ရတယ်…ရသင့်ရထိုက်တဲ့ တန်ရာတန်ကြေး မရလိုက်ဘူး…သူ့အမှားတစ်ခုမှ မပါပါပဲ သူအများကြီး
နစ်နာခဲ့ရတယ်..တကယ့် .လောကကြီးမှာ ဒီလို လူမျိုး…ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ အများကြီးပါပဲ…
ဟိုတယ်ကို ကားတစ်စီးနဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်လောက် ကတုံးဆံတောက်နဲ့ လူတစ်ယောက် နေ့လည်တစ်နာရီလောက်
ကြာတော့ ဆင်းလာပြီး လေသံခပ်မာမာနဲ့ …ငါ ဒီအခန်းကို မယူနိုင်တော့ဘူးတဲ့…ငါ့ မှတ်ပုံတင် ပြန်ပေးပါတဲ့…တခြား ဟိုတယ် ပြောင်းမယ်တဲ့…ကောင်တာက
ဆိုပြီး သော့ယူ…မှတ်ပုံတင် ပြန်ပေးမလို့ လုပ်နေတုန်း…ကိုယ်ကလဲ မနေနိုင်ဘူး…ကောင်တာနားသွားပြီး အခန်းက ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး…လို့ သွားမေးကြည့်လိုက်တယ်…မင်းတို့
အခန်းက ရေချိုးခန်းတံခါးက ဂျက်မကျဘူးတဲ့…ငါဆက်မတည်းနိုင်ဘူးတဲ့…ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ…ဒီကိစ္စ ဘယ်လိုမှ ယုတ္တိမတန်ဘူး ဆိုတာ…စဉ်းစားကြည့်ဗျာ…တစ်ယောက်ခန်းပါဆို
တစ်ယောက်ထဲနေတာ… ရေချိုးခန်း ဂျက်မကျလို့ ရေချိုးခန်း တံခါးဖွင့်ချိုးချိုး…အိမ်သာတက်တက် ဘာဖြစ်တုန်းဗျာ…တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဒါ့ကြောင့်လို့ ပြောတာ ဘယ်လိုမှ ကို
မရှိဘူး…တန်း သိလိုက်ပြီ..တခါထဲ သဘောပေါက်လိုက်တယ်…..နေ့ခင်းဘက် ခရီးသွား ဟန်လွှဲ…အခန်းယူ…ရေမိုးချိုး…အိမ်သာတက်…အနားယူ ဒါတွေ လုပ်ပြီး
ပိုက်ဆံမပေးချင်လို့ ကူလီ ကူမာ
လုပ်နေပြီဆိုတာ…အဲ့ဒါနဲ့ အခန်းချိန်းပေးမယ်ဆိုပြီး နောက်တစ်ခန်း ရွဲ့ပြီး ထပ်ချိန်းပေးလိုက်တယ်…အခန်းစစ်ကြည့်ပါဦးလို့ ၀င်တော့
လိုက်ပို့ရင်းနဲ့ထပ် ပြောလိုက်တယ်…အောင့်သီး အောင့်သက်နဲ့
ရပါပြီကွာ ဆိုပြီး…အခန်းထဲ ၀င်သွားတယ်…နောက် တစ်နာရီလောက်နေတော့ ကောင်တာ မေးကြည့်လိုက်တော့ CHECK OUT လုပ်ပြီး ထွက်သွားပြီတဲ့…ရီလိုက်ရတာ လူတွေကို….
ဒီလို နေ့လည်ဘက်ကို ခရီးသွားဟန်လွှဲ ဟိုတယ်အခန်း ခဏယူပြီး ရေမိုးချိုး…အိမ်သာတက်…အနားယူ ပြီးတော့ ခရီးဆက်ထွက်…ဒီလို လူတွေ ခဏ ခဏ ကြုံရဖူးတယ်…ဒါပေမယ့်
အခန်းခ မပေးချင်တာနဲ့ ဒီလို ဟိုတယ်ကို အပြစ်ရှာပြီး အကြံအဖန် လုပ်တဲ့ သူတော့ သူနဲ့မှ စကြုံ ဖူးတော့တာပါပဲ…
နောက် သုံးရက်လောက်ကျတော့ ဒီပြင်ဟိုတယ်က အသိတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့ ဒီအကြောင်း စကားစပ်ပြီး ပြောမိတော့ ဒီလို အသက်အရွယ်…ဒီလို ကတုံးဆံတောက်…ဒီလို ကားပုံစံနဲ့
သူတို့ ဟိုတယ်မှာလဲ ဒီလိုလုပ်ပြီး ဒီလိုဟောက်ပြီး ပိုက်ဆံမပေးပဲ ထွက်သွားဖူးတယ်တဲ့…သူတို့က ကိုယ့်ထက် ပိုဆိုးတာက ပြန်တောင် တောင်းပန်လိုက်ရသေးတယ်တဲ့….
သံဝေဂ တကယ်လဲရမိပါတယ်…သြော်…လူတွေ လူတွေ…သေသွားရင် ကိုယ့်နောက်ပါမှာကျနေတာပဲ….ဘာမဟုတ်တဲ့…ဘာမှ မဖြစ်လောက်တဲ့ ငွေလေးနည်းနည်းလေးအတွက်နဲ့တောင်
သူတပါးအပေါ် နင်းဖြတ်ကျော်ခွ ယုတ်မာလိုက်ကြတာလို့…တကယ့်ကြီးကိုပဲ အံ့သြမိပါတယ်ဗျာ….အမှန်ကတော့ ဒီလို လူစား အများကြီးပါပဲ….ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကြုံခဲ့
ရတာတောင် နည်းမှ မနည်းတာပဲ…လောကမှာ အများကြီး နေမှာ…နောက်ထပ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ တနပ်စားသူတွေအကြောင်းတွေလဲ ထပ်ရေးပြပါဦးမယ်…
ဒါမျိုးတွေ service လုပ်ငန်းတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်ကြ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က ဒါကိုနားလည်ပြီး
ထစ်ကနဲရှိ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကို လျော်ခိုင်းတာ တာဝန်ယူခိုင်းတာတွေ လှေနံဓါးထစ် မလုပ်မိဖို့လိုတယ်။
ကျုပ်က ငယ်ငယ်က အစားအသောက်ရောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ကြီးကြပ်တဲ့နေရာမှာ လုပ်ဖူးတယ်..
အဲဒီမှာ ပိုက်ဆံမပေးရအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ….. ဥပမာ
မှာစားသောက်ပြီးမှ မစားမသောက်ဖူးလို့ အတင်းငြင်းပြီး
တန်ဖိုးရှိပစ္စည်း ဖုံး ကားသော့ စသည် ပျောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး
မှာစားတဲ့လူကိုအရင်ပြန်လွှတ်ပြီးမှ တစ်ဝိုင်းထဲ အတူ အစအဆုံး စားသောက်လျက်နဲ့ ကိုယ်မသိဘူး ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောပြီး…
စသည် စသည် ဖြင့် ပိုက်ဆံမပေးရအောင်လုပ်လေ့ရှိတယ်။
အဲဒါမျိုးဖြစ်လာရင် မန်နေဂျာက ၀န်ထမ်းတွေကို လျော်ခိုင်းတယ်း
ကျုပ်က ၀န်ထမ်းအမှားမဟုတ်ရင် မန်နေဂျာနဲ့ အတိုက်အခံလုပ်ပြီး-
အဲသည်အစားအသောက်တန်ဖိုးကို ဆုံးရှုံးပျက်စီး စာရင်းတင်ပြီး
ဒါမျိုးတွေက.. လူထုရဲ့အခြေခံပညာရေး.. အသိသညာ.. ဘာသာရေးတို့နဲ့ဆိုင်မယ်..
ယူအက်စ်မှာ.. အဲလိုလုပ်လို့ရတာတွေ.. အများကြီး..
လူသားက.. လူသားမဆန်ရင်.. ကျန်တဲ့လူသားတွေ.. ဘာတတ်နိုင်တာလိုက်လို့…
မနက်စောစောအိပ်ယာထ.. လူလစ်တုံး.. ကိုယ်ပါထားတဲ့ချီးပုံးကြီး ကားလမ်းမအလယ်သွားသွန်ချထားလည်း.. ဘာတတ်နိုင်တာလိုက်လို့.. နော..
သဂျီး ပါ ထားတဲ့ ချီးပုံးကြီး ရွာလယ်မှာ ခဏခဏ လာသွန်တာ သဂျီး ဆိုတော့.. မပြောသာလို့ ကြည့်နေတာလည်း အခါခါပေါ့လေ..
မယုံရင် ရွာသားတွေ မေးကြည့်ပေါ့..
ရှင်တို့ဆီ မှာ အဲလိုလုပ်ရင် CCTV ထဲ မှာ မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဖြစ်မှာ တော့။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ…လ နှစ်ချောင်း ငင် လူရယ်လို့ ပီပီသသ မဖြစ်သေးတဲ့ သူတွေ လောကမှာ အများကြီး ရှိကြသေးတယ်….
သော်တာဆွေရေးတဲ့ မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ ရဲရင့်ခြင်းဆိုတဲ့ စာကို ဖတ်ပြီး အတော်သဘောကျမိတယ်။
မမှန်ကန်တဲ့သူဟာ မရဲရင့်ဘူး၊ သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့ လူတော မတိုးဘူးလို့ ထင်ထားတာ။
တခါတလေမှာ စာရေးသူပြောသလို မမှန်မကန်နဲ့ လူလည်ကျပြီး ရဲရင့်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့တော့ …
လူလည်း နားမျက်စေ့လည်ပြီး ဘယ်ဟာအမှန် ဘယ်ဟာအမှားဆိုတာကိုတောင် ဝေခွဲရခက်လာတယ်။ :buu:
အဓိက ကတော့ Service ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ သဘောသဘာဝကို နည်းနည်း တီးခေါက်မိပြီး ကာစတန်မာကို အဆင်ပြေအောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အချက်ကို နင်း ကြတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်တော့ ယူဆမိတယ်…
ခွိ ခွိ .. နိုင်ငံခြားသားရယ် .. အဖြူ ရယ်လို့ လဲ အထင်မကြီးနဲ့ နော် .. အဲ့ဒီ့ထဲ သူတို့လည်း ပါသေး .. အင်တာမဲ ထဲ တင်လိုက်ရမလားလဲ ချိန်းခြောက် ခံ ရတာ လည်း ခဏ ခဏ . ..
Customer is right မှာ limit ရှိကြောင်းပါ ….
ဒီဖြစ်ရပ်က ဟိုတယ်ကိုလူလည်ကျတဲ့ဖြစ်ရပ် ——-
တခါတရံ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းက ညစ်တာလည်းရှိပြန်သေးတယ်ဗျ
၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်ကမန္တလေးက ဟိုတယ်ပေါက်စတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေခံခဲ့ရတာပါ ။
ရေပူရေအေး ပြောင်းတဲ့လက်ကိုင်လေးကျိုးသွားလို့ ကောင်တာကို
သွားပြတာ ၂၀၀၀၀ ကျော်လျော်ခဲ့ရပါတယ် ။ အခန်းခက ၃၅၀၀ ကျပ်ပါ ။ သေသေခြာခြာကြည့် တော့ ကျိုးပြီးသားကို စူပါဂရူးနဲ့ပြန်ကပ်ထားတဲ့
ကော်အစအနတွေတွေ့ရတယ် ။ ပိုင်ရှင်နဲ့ မန်နေဂျာကတော့ ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးက လုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေသိ ကပ်စတန်မာ အဲဗား မရိုက် ပါဘူးခင်ဗျာ
တို့များကျတော့ လက်ကိုင်ကျိုးတာလောက်ကတော့ ရိုးနေပြီ….အလျှော်တောင်းဖို့ နေနေသာသာ ရေစိမ်ကန်ကြီး ကွဲ သွားတာတောင် မရခဲ့ပါဘူး…ကိုယ့်ဘာသာကို ခိုင်အောင် လုပ်မထားပဲ မလျှော်နိုင်ဘူးလို့တောင် ပြောသွားသေး….လျှော်တဲ့သူတော့ မရှိမဟုတ်ပါဘူး…ရှိပါတယ်…5 % ထက်မပိုပါဘူး…ကျန်တဲ့ 95% ကတော့ ဆောရီးပါပဲ….ကိုယ်ကလဲ ဒီပစ္စည်းတန်ဖိုးက ရှိလှ သောင်းဂဏန်းပေါ့…ဒါပေမယ့် ဒီလူတစ်ယောက်က အခြားလူ ဆယ်ယောက်…အဲ့ဒီကနေ တစ်ရာ …ဒီလို မဟုတ်တမ်းတရားပြောလိုက်ရင် ဒီသောင်းဂဏန်းမက ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုပြီး တော်ယုံတန်ယုံ ပြောမနေတော့တာပါ….သည်းခံလိုက်တာပဲများပါတယ်…
ဦးလေး တို့ ဟိုတယ်မှာ ခပ်စွာစွာ ဖိုက်တာ ပရိတ်သတ်တွေ လာတည်းကြတယ် ထင်တယ်..
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ ၀န်ထမ်းနဲ့ ဖောက်သည် ပြဿနာတက်ရင်
စေ့ငအောင် မမေးဘဲ ၀န်ထမ်းကို ဖိဟောက်တော့ ကြာတော့ဝန်ထမ်းတွေမှာ ပြန်မပြောရဲ့တဲ့
Customer is always Right! ဆိုတဲ့ စကား ရှိသမို့ သူတို့ မှားတာလဲ တတ်နိုင်သမျှ ပြေပြေပြစ်ပြစ် ဖြေရှင်းရမှာ Business ရဲ့ တာဝန်ပါဘဲ။
ကိုဂျော်နီ ကို ကြည့်ရတာ အဲလိုဘက်မှာ အတော်နားလည် ကျွမ်းကျင်ပုံရပါတယ်။
အဲဒီလို ပြသနာလာလုပ်တဲ့အကြောင်း တွေ၊ လူတွေ ကိုလဲ မှတ်တမ်းလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ထဲကဘဲ ရစ်နေတာများရင် ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ သတိပေးသင့်ပေးပေါ့။
ဟာသတစ်ခုတောင် ရှိတယ်။ Customer လုပ်ရပ် ကို သည်းမခံနိုင်လို့ သူတို့ဆိုင်မှာ လာဝယ်ခွင့်ပိတ်လိုက်တာ။
အမှန်တော့ မိန်းမနဲ့ Shopping လိုက်ရတဲ့ယောကျားင်္ တွေကို ဟာသလုပ်တာပါ။
ထုံးစံအတိုင်း အကြောင်းအရာလွဲ သွားရင် စောဒီးပါ။
တနပ်စား အကြောင်း မနေ့က ဖတ်လိုက်တယ်.. ဦးပါ ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ လုပ်သွားတဲ့ တနပ်စား အကြောင်းနဲ့ ပိုနီးစပ်မယ် ထင်တယ်..
ဒီနေ့ မနက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မနက်စာ ပေါင်မုန့် ထောပတ်သုတ် တပွဲ မှာ စားလိုက်တယ်..
ပထမဆုံး တကိုက် ကိုက်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပေါင်မုန့် ထောပတ်သုတ် က ချို ရမှာ လျှာ မှာ စပ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ စားပွဲထိုးကို လှမ်းပြောလိုက်တယ်.. ချက်ချင်း သိမ်းသွားပြီး နောက်တပွဲ လာချ ပေးပြီး လာတောင်းပန်တယ်.. ကလေး တယောက်က ငရုတ်သီး တပြားရိုက်တဲ့ စတီးဓါး ကို အသန့် နဲ့ မှားပြီး ယူလှီးလိုက်လို့ပါတဲ့.. အမ တို ပြသနာ မရှာလို့ တော်သေးတယ်.. ယောကျားလေး ဆိုရင် ပြသနာ ရှာမှာတဲ့.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။ စိတ်ထဲမှာ တနပ်စားတွေ အကြောင်း တွေးမိနေမိတယ်။
ကာစတမ်မာဘက်က လူလည်ကျတာလဲရှိသလို ကာစတမ်မာတွေခံလိုက်ရတာလဲမနဲဘဲကော။ ဗုံလုံတလှည့် ငါးပျံတလှည့်ဆိုတာမျိုးများလားမသိတော့ပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲ ခံလိုက်ရရင် နင့်ကနဲ ကာစတမ် မာ တွေဘက်ကလဲခံရပြီဆို တနင့်ပဲ။ ကျွန်မကတော့ နှစ်ခါသုံးခါမကခံရတာကတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေ မှာပိုတွက်တာပဲ။ ရိုးရိုးလဘက်ရည်ဆိုင်မှာဆိုခံသာသေးတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာပိုတွက်တာ ခံရတာ တော်တော်ဆိုးတယ်။ bill တောင်းလိုက် လို့ထွက်လာတာကြည့်လိုက်တော့ စားတာထက်ပိုများနေ တယ်။ ဒါနဲ့ ပြစမ်းဘာတွေဒုန်းဆိုတော့မှ တပွဲကို နှစ်ပွဲတွေတွက်ထားတယ်။ တဆိုင်ကျတော့ မစားတာတွေ ပါထည့်ထားတယ်။ နောက်တ ဆိုင်ကျတော့ set လိုက်မှာတာ ပြီးမှ အနားမှာ တွန်းလှည်းနဲ့ လာတော အဲဒီ မှာတဲ့ set ထဲမှာပါ တယ် အောက်မေ့ပြီးယူတာပေါ့။ အဲဒါကိုဘာမှမပြောပဲကြည့်နေပြီးမှ ရှင်းလဲရှင်းရော မပါဘူးဆိုပြီး နင့်နေအောင်ပေးခဲ့ရဖူးတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရစားသောက်ဆိုင်တွေမှာပါ။
တနပ်စား အမျိုး တကယ် မုန်းဖို့ ကောင်းဒယ် ..
တစ်ခါက ဇာတ်ကားထဲမှာလည်း ကျိဖူးဒယ် ..
စားလို့ ကုန်ခါနီးမှ ပန်းကန်ထဲ မှန်ကွဲစတွေ ထည့်ပီး
ဘာညာကွိကွ ထလုပ်တယ် …
အဲ့ဒီလို အမျိုးတွေဆို စိတ်ရှိတိုင်း လုပ်ပစ်လိုက်ချင်တယ် …